बादल ओलीको बुई, गौतम चाचाहुई: 'न रहे एमाले न भए माओवादी' | Citizen Post News
काठमाडौं । राजनीतिमा गुटका फिरन्ते कम भेटिँदैनन् । जीवनभर माओवादी र एमाले भएका दुई नेता यस्तै फिरन्ते देखिए । रामबहादुर थापा बादल र बामदेव गौतम । दुवै लडाकू स्वभावका पनि छन् । यी फिरन्ते नेता न एमाले भए न माओवादी । एकीकरणपछि उल्टो दाउमा हिँड्न थालेका छन् । यसैको मारमा पर्यो, जिम्मेवारी । नेकपाको संगठन विभागको जिम्मेवारी कसलाई दिने ? ओली भन्छन्,रामबहादुर थापा जी । प्रचण्डको दाबी, बामदेव गौतम ।
यहि विषयमा आइतबार साँझ ओली-प्रचण्ड वार्ता भएको थियो । लामो समय त हुन पाएन यहि विषयमा । मन माझ्न नै ठिक्क । केही दिन अघि प्रधानमन्त्री वा पार्टी अध्यक्ष भन्ने विषय र सहमतिको पत्र नै मिडियामा आएपछि ओली फायर थिए । स्रोतले भन्यो,‘त्यो के गर्नु भएको ? मैले कतिबेला छाड्दिन भनें भन्ने ओलीको तर्क रह्यो ।’ यसैमा प्रचण्डले स्पष्टिकरण दिँदा दिँदै साँझ झमक्क परेको थियो ।
अब, विषय प्रवेश गर्यो, जिम्मेवारीको । नेकपाको संगठन विभाग खासगरी महासचिव हुन्छन् । तर, विष्णु पौडेलको नाम हुत्याएर फ्याँकी दुई अध्यक्षका नजरमा परे, थापा र गौतम । थापा ओलीको बुई चढे, गौतमलाई प्रचण्डले चाचाहुई खेलाउँदै प्रस्ताव गरे । कुरो मिलेन । साक्षी थिए माधव नेपाल । नेपालले सहमति हुन नसकेको खण्डमा ईश्वर पोखरेल वा विष्णु पौडेल नै मानेर जान सकिने मत राखे । तर, दुवै अध्यक्ष के मान्थे ? स्रोतले भन्यो,‘कुरो मिलेन, सचिवालय बैठकअघि मिलाउने सहमति भयो ।’
कसले के पाउलान् प्रभू !
सबै प्रभूकै लिला भनेजस्तो भएको छ, नेकपाको जिम्मेवारी । एक त जनवर्गीय संगठनमा नै असन्तुष्टि छ त्यहाँमाथि नेताको जिम्मेवारीको कुरो आएपछि को कोसँग फायर हुने थाहा छैन । यहि पनि मतभेद छ अध्यक्ष ओली, महासचिव विष्णु पौडेल, ईश्वर पोखरेल, माधव नेपाललगायत थापाको पक्षमा छन् भने दाहाल, झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठलगायत भने गौतमको पक्षमा छन् । कुरो यहि अड्क्यो रे !
तर, अन्यको जिम्मेवारी लगभग टुंगो लागे जस्तै भएको छ । माधव नेपाललाई विदेश विभाग, झलनाथ खनाललाई नीति तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठान, ईश्वर पोखरेललाई स्कुल विभाग दिइने लगभग पक्का । नारायणकाजी श्रेष्ठलाई प्रचार तथा प्रकाशन विभाग पक्का छ । उनका लागि तगारो योगेश भट्टराई बनेका छन् । फ्याट्टै भट्टराईको नाम पनि अगाडि ल्याउन सकिने एक नेताले बताए ।
यता, प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्ष खोजेका छन् । पार्टी सञ्चालनको मुख्य जिम्मेवारी आफूले पाउनुपर्ने मत पनि राखे । पार्टीको नेतृत्वमा जबरजस्ती पकड बनाउन चाहेका प्रचण्डलाई ओलीले मिलीजुली भनिरहेका छन् ।